दाङमा प्रदेश ५ का व्यापारी नेताहरु किन भए भेला ? « Postpati – News For All
दाङमा प्रदेश ५ का व्यापारी नेताहरु किन भए भेला ?
शरद रेग्मी पढ्न लाग्ने समय : १ मिनेट
माघ २८, दाङ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५ नं. प्रदेश भेला मंगलवार तुलसीपुरमा भएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा झन्डै २ सय जति व्यापारिक नेताहरु सामेल थिए । भेला उद्योग वाणिज्य महासंघको चैत अन्तिममा हुने निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित थियो ।
जसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, र केन्द्रिय सदस्यहरुको नाम सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नाम सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष तिवारीको नाम जिल्ला तथा नगर उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विरवहादुर रावतले जानकारी दिए । भेलाले केन्द्रिय सदस्यमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजाल, किशोर आचार्य, कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ र चक्रवहादुर अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश ५ को अध्यक्षमा हेमराज बन्जाडे, शुरेन्द्र श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश भेलामा प्रदेश ५का जिल्ला तथा नगर समेत गरि ३६ उद्योग वाणिज्य संघहरु छन् । भेलामा तुलसीपुरको बेलझुण्डीमा प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने तयारी गरेको एक्स्पोले पनि भेलामा महत्व पाएको थियो ।
२०७६ माघ २८,मंगलवार को दिन प्रकाशित